🥇 ▷ Ayadoo laga duulayo muuqaalada fiidiyowga kirismaska ​​ee 2014 ee Apple 'The Song' ✅
Ayadoo laga duulayo muuqaalada fiidiyowga kirismaska ​​ee 2014 ee Apple ‘The Song’
Apple Waxay ina tuseysaa sheekada ka dambeysa fiidiyowga ciida masiixiga, The Song
Apple waxay la wadaagtay kanaalkeeda rasmiga ah ee YouTube-ka fiidiyow cusub oo uu doonayo inuu ku muujiyo caanka ah “dhacdooyinka ka dambeeyay” ee isaga Fiidiyow cusub oo dhaqaaq ah ayaa u rajeeyay ciidaha farxadda dhammaan adeegsadayaasha Kirismaskan, 2014 oo cinwaan looga dhigay ‘The Song’.
Heesta, fiidiyow dhaqaaq ah oo leh akhlaaq dhaqaaqa
Sidii aan horey kuugu sheegay, Apple waxay dhawaan la wadaagtay fiidiyowga loogu magac daray Sheekada ka dambeysa «Heesta» kaas oo uu na tuso sheekada ka dambeysa filimka quruxda badan ee ‘The Song’, kaas oo aan fursad u helnay inaan ku tusno maalmo ka hor.
Sharaxaadda fiidiyowgaan cusub, Apple Leave the description soo socda:
Haddii ay duubitaan ka sameyneyso qol ay ku noolyihiin qof kumanaan mayl u jira, ama gabay GarageBand loogu talagalay qof aad jeceshahay, maahan aalado la tirin karo, waa fikirka ka dambeeya hadiyadda.
Tan waxay u jeedaan taas, iyada oo aan loo eegin in ay duubitaan ku sameyneyso moobeelka qof kumanaan mayl u jira, ama gabay GarageBand loogu talagalay qof aad jeceshahay, maahan aaladda la tiriyo, laakiin dareenka ah in gadaal laga wado hadiyada. Asal ahaan, farriinta noo keenaysa oo soo gal fiidyowgii ugu dambeeyay, “Heesta”.
Heesta, malaha fiidiyowga ugu wanaagsan kirismaska ​​ee uu daabacay Apple
Muuqaalkan cusub, ee loogu magac daray “Sheekada ka dambeysa Heesta Heesta”, sida aan arki karno, waxay muujineysaa Fannaanka Dana Williams oo ay la jirtay heesta Rhiannon Giddens, oo ay weheliso muuqaallo muhiim ah, oo la mid ah riwaayadii ‘Man Man Records’. Muuqaalkan fiidiyowga wuxuu ku hadlaa, iyo waxyaabo kale, oo ah nidaamka Codka-O-Graph, kaasoo u oggolaanaya dadka isticmaala inay ku duubaan codkooda aaladda loo yaqaan ‘vinyl’, iyo sidoo kale hawsha gebi ahaanba ay u adeegsatay Dana Williams inay ku duubto gabaygan gaboobay.
Dabcan, Heesta wali waa muuqaal cajiib ah oo qurux badan, inkasta oo ay jirto faafin guud oo dhan oo Apple Waxay ka dhigaysaa wax soo saarkiisa (iPod, iPad mini, MacBook Air) isbarbar dhig, inkasta oo ay had iyo jeer ixtiraamaan qisada oo dhan.
Waxaan jecel nahay Fiidiyowga Kirismaska ​​ee 2014 ee Apple, The SongMaxayse u eg tahay, baahinta Apple marka laga reebo.